Ushicilelo loLenovo Z6 loLutsha luza kuboniswa kule veki | I-Androidsis
U-Lenovo usilungiselele i-smartphone entsha. Ibrand iya kuzisa uLenovo Z6 uHlelo loLutsha kule veki, umhla wakhe wokubonisa ucwangciselwe uMeyi 22. Ke kwiintsuku nje ezimbalwa siya kuba nakho ukubona le smartphone intsha yohlobo. Nangona sele sineenkcukacha zokuqala ngayo, enkosi kwinkampani uqobo.
Ukususela Kuyenzeka ukuba ugcine olu Hlelo loLutsha lweLenovo Z6 ngokusemthethweni. Enkosi kwiwebhusayithi yokubhukisha, sineefoto zokuqala malunga nale fowuni, kunye neenkcukacha zayo zokuqala. I-smartphone ethiwe thaca njenge ingxelo elula yeZ6 Pro, isiphelo sophawu lwakutshanje sophawu.
Olu Hlelo loLutsha lweLenovo Z6 lufika kunye isikrini esinotshi emile njengokwehla kwamanzi. Ukongeza, isixhobo siyakuxhasa i-HDR10, njengoko kubonisiwe kwezi foto zokuqala. Okwangoku akukho nto iyaziwayo malunga nobungakanani bescreen kunye nesisombululo sayo. Ifowuni kulindeleke ukuba ifike inemibala emibini: omnye uluhlaza kunye nomnye umbala omfusa.
Ngasemva kwefowuni, njengoko sibona kulo mfanekiso uphambili, ikhamera engemva kathathu isilindele. Le yinto esiyibona ngakumbi nangakumbi kwi-Android, kokubini kwisiphelo esiphakamileyo nakuluhlu oluphakathi lweprimiyamu, iHuawei P30 Lite ngumzekelo olungileyo woku. Ukongeza, isivamvo somnwe somnwe sikwafumaneka ngasemva kwifowuni.
Ibhetri, Olu bhethelo loLenovo Z6 loLutsha lubhejela kumthamo we-4.050 mAh. Ke ngoko, ithembisa ukuzimela okuhle, nangona singazi ngalo mzuzu ukuba yeyiphi iprosesa eza kusebenzisa le fowuni. Ngapha koko, le kuphela kwedatha esinayo kwesi sixhobo ukuza kuthi ga ngoku, ukongeza kwezo foto.
Ngomhla we-22 kaMay. Nangona ukwaziswa kwefowuni, ubuncinci e-China, ayimiselwanga de kube ngoMeyi 28. Okwangoku asinayo idatha ekumiselweni kwayo eYurophu. Siya kwazi ngakumbi kwinkcazo-ntetho yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » lenovo » I-Lenovo Z6 yoHlelo loLutsha ifika kule Veki: Iifoto zokuqala kunye neenkcukacha ezisemthethweni